राजविराज, २९ साउन । प्राध्यापक डाक्टर राजीव कुमार झाले नेपाल सरकारले बीआरआई पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान विना नै हस्ताक्षर गरी गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार एक अनलाईनलाई अन्तरवार्ता दिदै डा. झाले सरकार गृहकार्य विनानै सबैकाम गरी देशलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाए । उनले भने बीआरआई आएकै सन् २०१३ मा हो । त्यति ढिलो भएको छैन । हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको अध्ययन र अनुसन्धान नगर्नु हो । विआरआईले नेपाल सरकारलाई ऋण भार वढाउन सक्ने भएकोले राम्रो संग अध्यन अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
देशमा नेकपाको सरकार बनेपछि राजनैतिक स्तरमा नेकपाको कार्यकर्ताको चिन भ्रमण, चिनबाट नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरुका लागि अफर आउनु नेपालको चिन प्रतिको झुकावकै कारण सरकारले बीआरआई पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान विना नै हस्ताक्षर गरी काम अगाडी बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
चिनले नेपालको उत्तरी भाग मात्रै नभई भारत संग सिमा जोडिएको तराई मधेश क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउन पनि विभिन्न प्रकारको लोभ्याउने र देशलाई ऋणमा डुवाने परियोजना सञ्चालन बारे पनि चासो लिएको छ । चिन जहिले पनि स्वार्थ रहित नभई स्वार्थ सहितको परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने गरेको छ । पहिला लोभ्याउने परियोजना देखाउने र पछि त्यसबाट आफ्नो फाईदा मात्र उठाउने उसको पुरानो नीति हो यसमाथि अहिले सम्म नेपालले गहनताका अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् । चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टरका निर्देशक समेत रहेका डा. झाले अन्तरवार्ता कै क्रममा भनेका छन कि नेपालको विकास नहुनुमा र छिमेकी देशहरुसँगको सन्तुलनमा शासक वर्ग भन्दा पनि प्रशासक वर्गलाई म दोषी मान्छु । किनकी शासक वर्ग नेपालमा ६-६ महिनामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । प्रशासक त स्थिर सरकार हो तर यो संरचनाले काम सही रुपमा गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बीआरआई पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान विना नै हस्ताक्षर गरीको आरोप लगाएपनि झाले नेपालको झुकाब चिन तिर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाईन्छ । विआरआई अन्तर्गतका देशलाई चीनले केही समय अघिमात्र ३ हजार जनामा छात्रवृत्ति घोषणा गरेको छ । त्यो बढ्दै जान्छ । त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ । हाम्रो देशलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसार उनीहरुले प्रदान गर्छन् । हाम्रो डिग्रीलाई विश्वका विश्वविद्याल–यहरुले पहिचान गर्दैनन् ।
चीनले केही समय अघिमात्र २४ देशसँगको डिग्रि पहिचान गरेको छ तर नेपाल यसमा परेको छैन । नेपालको डिग्रिलाई पनि पहिचान गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
यता चीनले आफनो स्वार्थका लागि प्रदेश नम्बर २ मा दुध उत्पान केन्द्र खोल्ने भनिए प्रदेश सरकारलाई यस वाट घाटा हुने देखिए पछि यो कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको छ । भुमि तथा कृर्षी सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले चीनियाहरुले घास र दुध उत्पान गर्न २ हजार हेक्ट जग्गा माग गरी धेरै महत्वकान्छी भएको बताए । उनले प्रदेश नम्बर २ लाई दुध उत्पादन भन्दा पनि घास उत्पान बढी गर्ने देखिए पछि यो परियोनालाई स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
के हो बीआरआइ ?
बीआरआईले विदेशहरु संग ‘सम्पर्क बढाउँने काम गर्छ । सम्पर्कलाई राम्रो बनायौँ भने नेपाल विकास गर्नका लागि ठूल्ठूला परियोजनामा काम गर्न सकिन्छ । बीआरआई भनेको सडक बनाउने निर्माणको काम गरी विकास गर्ने हो । हामीलाई सडक चाहिएन भने बीआरआईमा व्यवस्था छ । बीआरआईमा हामीले आफूलाई जे आवश्यकता छ, त्यही बनाउने हो । जस्तो हाम्रो लागि पर्यटन आवश्यकता छ भने बीआरआईमा त्यसको लागि पनि व्यवस्था छ । हामीकहाँ विज्ञान र प्रविधि छैन, त्यसमा सहकार्य गर्न सक्छौँ ।
अनुसन्धान र विकासमा पनि बीआरआईमा सहकार्य हुनसक्छ । बीआरआईमा संलग्न जति पनि देश छ, त्यहाँ हामीले जडीबुटी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ । हामी सचेत भएर यसमा काम गर्न सकिएनन भने बीआरआईले देशको ऋणभार पनि बढाउन सक्छ ।